Kutheni uJason Witten eshiya i-Booth 'yeBhola yangoMvulo ebusuku' - I-Nfl
Kutheni uJason Witten eshiya i-Booth 'yeBhola yangoMvulo ebusuku' kwaye ebuyela eDallas
Ngentwasahlobo ephelileyo, uJason Witten wayehleli eofisini kaJerry Jones eFrisco, eTexas. Ngaphandle kwefestile, la madoda mabini ayayibona intsimi yokuziqhelanisa nalapho uWitten ebezizikhonkwane zakhe ezinzima, ezikhuthazayo. UWitten wayecinga ngokushiya iiCowboys ukuze abe ngumvakalisi NgoMvulo ebusuku ngeBhola ekhatywayo. Emva kokuqwalaselwa, uJones wamsikelela. Yiya kuba nguJohn Wayne, utshilo.
Ngaphandle kweWitten waya NgoMvulo ebusuku . Kulapho, i-Twitter yenzela uWitten into awayeqhele ukuyenza kubadlali ababuyela umva. Okuninzi. Qho ngeveki. NgoLwesine, uWitten othusayo kwaziswa ukuba emva kwexesha elinye kwidokodo ubuyela kwiiCowboys. UJohn Wayne ubuyile kwifama.
Ndathetha noWitten kwi-Super Bowl ekuqaleni kwale nyanga malunga nexesha lakhe lokuqala, elinzima. Kunyaka, ndakhe ndeva, Awuyikholelwa indlela anomdla ngayo lo mfo ngobuqu! amaxesha amaninzi kangangokuba ndaphantse andakholelwa.
Ukubuya kukaJason Witten kwiiCowboys Kulungile eDallas kwaye kungcono 'ngoMvulo ebusuku ngeBhola ekhatywayo'
Into yile, ngaphandle kwebhokisi yeTV iWitten ngu Iyachukumisa. Ufike enxibe ikota-zip egubungele amagxa akhe amakhulu; ibunzi lakhe lalingaxutywanga; iinwele zakhe zazinjalo ubungqongqo obukrokrelayo basemva komsebenzi . Ukuthetha noWitten kwakufana nokubukela ividiyo efundisayo malunga nendlela yokwenza udliwanondlebe lomsebenzi. Amagama aphuma kuye. Akazange abonakale enqumama. Ukuba awuzange umnike NgoMvulo ebusuku Umsebenzi, ubuya kumjonga njengonobhala wezomkhosi.
YeWitten, eyona nto inqabileyo ngokwenza NgoMvulo ebusuku ngeBhola ekhatywayo yayikukugxekwa. UWitten wayengazange afumane uxinzelelo olubi ebomini bakhe. Ngoku, kumabonwakude, wayekhaba iesile lakhe kwi-Twitter veki nganye. Iqale kumdlalo wakhe wokuqala wangaphambi kwexesha, xa wayevela kwiscreen ephethe imakrofoni yakhe ye-ESPN ngokuthe ngqo phambi kobuso bakhe. UJason , ubufuna ukuthi, singakubona. UkwiTV.
UWitten wanikela ngehlabathi ubuncwane obuncinci be-malapropisms. Ukhupha omnye umvundla entloko . Umthetho omtsha wokurhabaxa-odlulayo wawukhona kancinci kwiphiko lasekhohlo . UWitten wayehlala ethetha ngendlela ayithanda ngayo ibhola. Wayecinga ukuba eyona midlalo yakhe ilungileyo kwisizini ephelileyo yayiyi-Chief-Rams classic, umdlalo we-ESPN, kwaye, ngokungaqhelekanga, usasazo olwahlukileyo lokuba yena, uJoe Tessitore, kunye noBooger McFarland babiza umdlalo wobuntshatsheli beKholeji yeBhola ekhatywayo. Ngelo xesha uWitten wayengakhathazeki kangako ngoomatshini beTV kwaye nje wathetha .
Kodwa xa i-Twitter isentloko yakho, kunzima ukuyikhupha. Emva komdlalo, uWitten akazange afune nokuyijonga. Uyabona ukuba ujije nje ngokujonga nje kwifowuni yakhe. Xa wayenomdlalo ombi, iitekisi zakhe zazithetha into enje, Bambelela apho.
Emva kokubiza iPro Bowl, uWitten wanikela eyona ndebe yoMdlali Oxabisekileyo kuPatrick Mahomes II noJamal Adams. Indebe yaphuka xa wayichola. Ingcinga ebaliweyo, Oko kuya kuba kwi-Twitter, nayo . It wayenjalo .
UWitten wazama ukucinga ngokusasaza njengoko wayecinga ngebhola. Yeyiphi imilinganiselo yokuphumelela? Uye wafumanisa ukuba ukwalatha into enye emva komdlalo kungcono kunokukhomba ezintathu okanye ezine, kwaye uthethe into enje, Ufuna uGronk ngaphandle, ngamanye amaxesha ukhetha ukubiza igama lesikimu okanye umdlalo.
I-ESPN inyule uJoe Tessitore ukuba akhe ubuDlelwane bayo neNFL-Nasi isizathu
Ekuqaleni kwesizini, uWitten wayegcwalisa iqela lakhe ngamanqaku kumdlalo. Emva kwexesha, waqala wabaxelela izinto ezinje, Masiqwalasele kunogada olungileyo nakwindlela yokuzikhusela. UWitten wayecinga ukuba i-nerdery encinci enxibileyo imalunga nomabonakude anokuma.
Abalandeli beCowboys baqaphela isigqebelo esithile kwimizabalazo yeWitten. E-Dallas, wayekufutshane nesiphelo esiqinileyo kunye nomfo ogqibeleleyo. Inombolo yakhe ibingu kubonisiwe kwisakhiwo sasedolophini xa wayethatha umhlala-phantsi; babiza a usana lwendlulamthi kumyezo wezilwanyana emva kwakhe. UTony Romo wayeyikota yekota kunye neziphene ezibulalayo. Kumabonwakude, batshintshe indawo ngokufanelekileyo. buthuntu yayigqibelele kwaye iWitten yayineempazamo. Oko bekufanele ukuba kuyothusa ngokwenene.
IWitten ingaziva isithunzi sikaRomo. Hayi ngendlela ekrakra okanye enomona — ngokuqinisekileyo wayemthanda uRomo. Kodwa eyabantu ababiza imidlalo yebhola ekhatywayo kwiTV, URomo ngumbulali wecandelo . UWitten wayecinga ukuba wayenokuqikelela imidlalo, naye. Kodwa ke wayeza kubonakala ngathi uyikopi.
Akumangalisi ukuba iWitten ifuna ukuba yiCowboy kwakhona. Uphose izinto ezithile malunga nebhola ekhatywayo, njengaleyo yokukhwela kwinqwelomoya xa abadlali bebaleka malunga nento eyenzekileyo kwaye bangacingi ngokulandelayo. Yayiyindawo entle yokuhlangana kwilizwe elixakekileyo. Kunyaka ophelileyo, uWitten wabuza ukuba NgoMvulo ebusuku abasebenzi baphunga i-tequila (isipho esivela kummemezeli we-ESPN Deportes) kwibhasi ebuya ebaleni. Wayefuna ukwenza kwakhona imvakalelo yokuphila ngalo mzuzu.
UWitten wayenezinto ezimbalwa awayenqwenela ukuzenza malunga nexesha lakhe lokuqala. Wayenqwenela ukuba enze uluvo lokuqala olungcono. Wayenqwenela ukuba ebekhona inkulu kwangoko, ukuze akwazi ukulingana namandla kaTessitore.
Ukhumbule umdlalo ngokuchasene neEagles kunyaka wakhe wesibini neeCowboys. Yayingumbutho wakhe ophumayo: ukubanjwa kwasithoba kwiiyadi ezili-133. Kwakuxa wayehamba kwithemba elinomdla waya kulo mfana inokuba yiHolo yeNzara. Kumabonwakude, uWitten wayecinga ukuba mhlawumbi ebeya kuba nemvakalelo efanayo. Ubuncinci, wayecinga ukuba uyazi Njani ukulunga.
UWitten ucinga ngaye njengoyena mntu uqeqeshwayo kwindalo yonke. Wayenecebo lokuba ngcono. Wayeza kuchitha ixesha lokuphumla ebukele yonke eyakhe NgoMvulo ebusuku imidlalo. Kwakhona wayeza kujonga enye imidlalo yabavakalisi enesandi ezantsi. Wayeza kubhengeza umdlalo, emva koko aphakamise isandi kwaye athelekise umnxeba wakhe nommemezeli.
Wayeqhubeka nombono wokusasaza. Wayeza kundwendwela i-ESPN's Kirk Herbstreit, owayenokuthatha amacebo anzima kwaye athethe ngawo ngolwimi olucocekileyo nolulula. Wayetyelela noJeff Van Gundy abuze malunga nokuphumelela kwindlu yamadoda amathathu. Wayeza kuya eMantla California atyelele uJohn Madden, oyena mntu ungumsasazi wokugqibela. Yena noMadden banokujonga kunye kunye.
UWitten waqonda ukuba yiyo ishedyuli Ngaphezulu kwababhengezi, emisela impumelelo ye NgoMvulo ebusuku ngeBhola ekhatywayo . I-ESPN ibingcono kakhulu NgoMvulo ebusuku imidlalo kulo nyaka uphelileyo, kodwa abanye abantu baziva ukuba ngokuyinxenye yakhelwe kwithamsanqa. Bafumene umdlalo wonyaka neChiefs-IiRams. Bafumene ukuhla kokugqibela kweFitzmagic kwiveki yesi-3. UDrew Brees waphula irekhodi lokudlula ngo-Okthobha ngobusuku bangoMvulo.
Khange acinge ukuba i-ESPN ingathatha ithuba lokuba ithamsanqa elinjalo liziphindaphinde kwi-2019. Kunye noTessitore, wayeyinxalenye ye-ESPN yomtsalane ekhubekisayo kunye ne-NFL. Ngaphezu koko, uWitten wayefuna qonda ishedyuli. Wayeyazi NgoMvulo ebusuku ngekhe afumane isiqingatha sedazini silo. Ke uWitten wayefuna ukuqonda ukuba bangayikhetha njani iqela elizayo kunyaka ozayo-njengee-2018 zeNkosi-kwaye bazenze NgoMvulo ebusuku ngokukhawuleza ngokungxamisekile.
Inkqubo ye- NgoMvulo ebusuku Idokodo laziva linobunkunkqele xa iBoogermobile yaya kuthimba emva kwexesha. Kodwa i-ESPN ayikaze icinge ukuba ungayibonisa njani iWitten, indlela yokumnika inyani. Owona mzuzu wakhe mkhulu xa waye Wathetha ngamava akhe obundlobongela basekhaya Ngexesha lomdlalo weRedskins-Eagles (eyathi ngokwayo yavuselela impikiswano, kuba uWitten wayedlale noGreg Hardy). Kule ntwasahlobo, uthungelwano mhlawumbi lwaluza kunika uWitten inguqulelo yakhe yenkampu eyilwayo kaJon Gruden, ukuze abe yinguqulelo encinci yomfo endaweni yakhe.
IWitten ayiyi kulungisa ngesandla esisodwa ukulungisa ityala leCowboys. Akakhange abambe ngaphezulu kwe-80 ekubambeni ngexesha ukusukela nge-2012. Kodwa ukujoyina iiCowboys kwakhona kuthatha iWitten kude neTV yezemidlalo kwaye kuyibuyisela kwindawo apho abantu babecinga ukuba yinto esondeleyo. Yintsimbi encinci. Ukuba nguJohn Wayne, uWitten kwafuneka akhwele ekhaya.
umbala weenwele ze-rap monster
izinto zasemzini 3 isiphelo
jalen green g iqela leqela
Iibhili zeesmons ngaphezulu kwe-100
Epreli 1 rick kunye nodaka
ihlathi lehlathi ihlathi tracker